LeEco LETV S3, nyocha na uche | Gam akporosis
Alfonso nke mkpụrụ osisi | | Nyocha
LeEco chọrọ inweta ọnọdụ na ahịa ekwentị. Emeputa odụk Europe ike ekele na ngwọta dị ka Le Pro 3 ma ọ bụ na LeEco LETV S3, ekwentị nke ị nwere ike ịzụta na ịpị ebe a maka naanị euro 98 na ihe ijuanya maka uru ọ bara maka ego.
Ọ bụ ya mere anyị ji were ohere ịme ọnụ na nnukwu ngwaike yana ọmarịcha mma nke na-edobe ya n'ihu ahịrị ma ọ bụrụ na ị na-achọ ekwentị nwere ike karịrị oke maka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ na ọnụahịa mkpọmkpọ ebe.
Banyere imewe anyị na-ahụ na LeEco LETV S3 yiri nnọọ ihe ngosi Pro 3, ọ bụ ezie na ụfọdụ obere iche. Ma ọ bụ na imepụta ihe niile, na igwefoto n'ihu na ihe mmetụta ọkụ nwere njirimara, na mgbakwunye na ihe mkpịsị aka mkpịsị aka ya na ọla mechara, mee ya ka ọ dị ka ụdị dị elu.
Ke ofụri ofụri, imewe nke LeEco LETV S3 adịghị apụ apụ ma ọlịỌbụna ọ dị ka ekwentị ochie, mana anyị na-ekwu maka ọdụ na-agaghị agafe euro 120 n'ihi ya, anyị enweghị ike ịrịọ ọtụtụ ihe na nke a.
Agbanyeghị, e nwere ụfọdụ nkọwa nke ya imewe na m hụrụ na-akpali nnọọ mmasị. Aga m amalite site na ikwu maka ịpụ iche nke bọtịnụ capacitive, nke na - apụta naanị mgbe ịpị ya na mpaghara ala. Usoro a na - eme ka ihu n'ihu dị mfe ma na - echekwa ohere ihuenyo ka o kwere mee.
N'agbanyeghị na a 5.5-anụ ọhịa ihuenyo na Full HD mkpebi, ekwentị adịghị oke oke na ọkpụrụkpụ 7.5 mm ya na-eme ka ngwaọrụ ahụ dị ezigbo mma na aka.
Ahụ nke LeEco LETV S3 bụ nke aluminom nwere mmetụ nke plastik, ihe a ga-atụ anya na ekwentị nwere njirimara ndị a, ọ bụ ezie na m ga-ekwu na mmetụta dị na aka dị ezigbo mma, na-enye mmetụ obi ụtọ na nnukwu mmetụta nke anwụ ngwa ngwa. Ikekwe ihe kachasị njọ bụ ịdị arọ ya:153 grams. Ekwentị dị mfe ma na-enye mmetụta nke ịbụ ngwaahịa ụmụaka, ọ bụ ezie na m ga-ekwu na m na-eji nnukwu smartphones eme ihe n'ihi ya ọ ka bụ mmetụta m.
N'akụkụ aka nri nke LeEco LETV S3 bụ ebe anyị na-ahụ igodo akara olu na bọtịnụ ike ekwentị. Nhazi zuru oke na ọnụ ndị China na nke ahụ na-arụ ọrụ nke ọma. Ikwu na iguzogide nrụgide karịrị ihe ziri ezi na bọtịnụ niile na-enye ụzọ dị mma.
Akụkụ aka ekpe bụ ebe anyị ga-ahụ oghere SIM kaadị na ihe ọ bụla ọzọ ebe akụkụ a dị ọcha. Na ala anyị na-ahụ oke ịtụnanya ịhụ ọdụ ụgbọ mmiri USB ụdị C. Na ekwentị nke ọnụahịa a nwere njikọ nke ụdị a bụ isi na ihu ọma ya. Na-esote ọdụ ụgbọ mmiri a, anyị ga-ahụ mmepụta nke ọkà okwu na igwe okwu nke ekwentị ahụ.
LeEco chọrọ ịkụ nzọ dị ukwuu site na iwepu mmepụta isi okwu. Ee, LeEco LETV S3 enweghị mmepụta 3.5mm. Onye mepụtara ya na-agba mbọ ịgba mbọ soro ndị na-asọmpi ya, mana ọ bụrụ na anyị echebara ọkpụrụkpụ ya echiche, echere m na ha ekwesịghị iwere ogbugba ahụ. N'ezie, igbe ngwaahịa na-abịa na ọkọlọtọ yana nkwụnye iji jikọọ isi ọ bụla site na ọdụ ụgbọ USB Type C nke ngwaọrụ ahụ. Ọ bụ ihe.
Na azụ bụ ebe anyị ga-ahụ ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na-esote isi igwefoto nke ngwaọrụ ahụ. Ekwentị nwere nhazi dị mfe ma nke ahụ apụtaghị na ndị ọzọ mana nke ahụ na-enye mmetụ dị mma, yana ijide n'aka nke ọma.
Nlereanya LETV S3 X22
Android 6.0 dabeere na oyi akwa
5.5 anụ ọhịa IPS 2.5D LCD ụdị na Full HD mkpebi 401 dpi
Nhazi MT 6797 Helio X20 Deca isi nke 4 cores na 2.1 Ghz na nke ọzọ 6 na ọsọ elekere kachasị nke 1.8 ghz
GPU Mali T880 Quad Core na ume ume nke 61hz.
RAM 3 GB ụdị LPDDR3
Nchekwa n'ime 32 GB nke ebe nchekwa dị n’ime n’enweghị ohere ịgbasa ya
16 MPX nwere oghere oghere nke 2.0 nke na-enye anyị oke mkpebi foto nke 4160 x 3120 - Ndekọ vidiyo FullHD na 30 fps na ngwa anya ihe ngosi ihe oyiyi - FlashLED
Igwe n'ihu 8 MPX nwere oke mkpebi mkpebi nke 2560 x 1920 na ndekọ vidiyo HD
Njikọ Dual SIM: Micro Sim tinyere Nano Sim - 2G: GSM B2 / B3 / B8 CDMA: CDMA 2000 / 1X BC0 3G: WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 TD-SCDMA: TD-SCDMA B34 / B39 4G: FDD-LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 TDD / TD-LTE: TD-LTE B38 / B39 / B40 / B41 (2555-2655MHz) - Bluetooth 4.2 - WiFi 2.4 Ghz na 5 Ghz - GPS na aGPS GLONASS na BEIDU - - USB OTG
Atụmatụ ndị ọzọ Onye na-agụ mkpịsị mkpịsị aka
3.000 mAh na ngwa ngwa na-akwụ ụgwọ usoro 3.0 na-akwụ ụgwọ
Akụkụ 151.1 x 74mm x 7.37mm
Ibu ibu Mmemme 151
Ahịa Ego 98 na-enye TomTop
Akụkụ arụmọrụ na-abịarute imeghe arụmụka kpụ ọkụ n'ọnụ maka ọnwa ole na ole na tebụl. Taa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ekwentị ọ bụla nwere ike ịmegharị egwuregwu ọ bụla ma ọ bụ ngwa ọ bụla na-enweghị nsogbu n'agbanyeghị ole eserese ọ chọrọ na, na-echebara nke ahụ echiche LeEco LETV nwere ihe nhazi Helio X20, ọ ga-atụ anya na ekwentị na-arụ ọrụ nke ọma, na nwere.
Otu nkọwa nke LeEco LETV bụ na ejighị ya na bloatware nke pụtara na ọ naghị ebufe sistemụ ahụ nke ukwuu, na-ekwe ka ọdụ ahụ rụọ ọrụ nke ọma.
Ihe Nhazi Helio X20 Ọ bụ ihe dị n'etiti SoC sitere na MediaTek nke na-enye anyị cores iri kewara n'ime ụyọkọ atọ na-arụ ọrụ ma gbanyụọ dabere na ike dị mkpa. Uzo abuo di ike na 2,3GHz, ihe ozo ozo di na 1,9GHz, na n'ikpeazu nke ikpeaji ano na 1,4GHz. CPU dị ike nke quad-isi Mali GPU kpuchiri ya. Ebee ka anyị ga-achọpụta na ụkọ ihe a? Abia n’egwu egwu.
N'ihe banyere LeEco LETV S3, anyị nwere ike ịgba ọsọ ngwa dị egwu ma na-achọ ngwa ngwa nke mbido ngwa ngwa ya bụ nke na-egosi ụfọdụ oge mgbe anyị multitask. Ọ bụ ezie na ahụmịhe na ngwa ndị ahụ dị ezigbo mma, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ maka sistemụ arụmọrụ n'onwe ya, ịtụgharị gaa na ngwa ndị ọzọ na-emeghe bụ ihe na-agwụ ike na obere LAG pụtara. Ọ dịghị ihe ọ bụla na-atọ ụtọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị ga-eburu n'uche na ekwentị anaghị efu 100 euro, mana nkọwa m chọrọ ikwu. N'ezie, enwewo m ike igwu egwuregwu ọ bụla na-enweghị nsogbu.
Ebe o mechuru m ihu, na otutu, LeEco LTV S3 a bụ mgbe eji ya akara mkpisiaka. Na biometric agụ ada ọtụtụ ugboro otú ahụ ka m mechara ghara iji ya. Anaghị m atụ anya na ekwentị nke ihe na-erughị 100 euro na-abịa na onye na-agụ akara mkpịsị aka, mana ọ bụrụ na ọ jikọtara ya na ọ dịkarịa ala ọ na-arụ ọrụ. Ezigbo ụra na aka aka ndị otu LeEco na nke a.
N'ụzọ dị mma, ọkà okwu dị ike nke ngwaọrụ ahụ na-akwụ ụgwọ maka ọdịda nke onye na-agụ mkpịsị aka. Ma nke ahụ bụ LeEco LETV S3 O juru m anya nke ukwuu ụda dị elu nke ngwaọrụ na-enye. Ọnụ ya na-ada ezigbo mma karịa ka a tụrụ anya ya, na-enwe ọtụtụ ọdịnaya ọdịnaya na-enweghị iji ekweisi.
Echere m na ọdịdị mkpọ mkpọ bụ mgbe m na-ege egwu mana m ga-ekwu ya ọkà okwu nke LeECO LETV S3 na-enye ezigbo mma ruo 80% ụda kachasị elu, site na mgbe ahụ ọ na - amalite itu ntakịrị. Ma site na olu na 80% ogo na ike nke ụda karịrị ezuru.
Anyị enweghị ike ichefu ihuenyo ya, nke mejupụtara IP5.5-inch 401-anụ ọhịa nke ruru pixels XNUMX kwa inch (dpi). Otu panel nke na-enye ogo dị elu, nwere agba, nkọ na agba agba na-akpọ gị oku ịnụ ụtọ ọdịnaya nke ọdịnaya na ụlọ ọrụ. More ma ọ bụrụ na anyị na-echebara na ekwentị nwere ihe karịrị ezi larịị nke ihie na dị ezigbo mma ikiri akụkụ.
Igwe batrị LeEco LETV na-eti m ihe dị ka mma. Ekwentị nwere njirimara ndị a kwesịrị ịnwe batrị dị ike karị, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịnwụ ụbọchị nke nnwere onwe na-enweghị nsogbu, ekwentị nwere njirimara ndị a kwesịrị iji batrị mAh 4,000 bịa.
N'ikpeazụ kwuo na c16 megapixel n'azụ igwefoto Ọ na-eme omume nke ọma, na-enye ezigbo arụmọrụ ọ bụrụhaala na anyị nọ na gburugburu ọkụ ọkụ, ebe n'ọnọdụ ọkụ dị ala ọ bụ ebe mkpọtụ a na-atụ ụjọ na-apụta. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụhaala na anyị na-arụ ọrụ n'ọnọdụ ọkụ dị mma, foto ndị ahụ ga-adị mma nke ọma na ụda dị mma ma dịkwa ezigbo.
Ihe ngwanrọ igwefoto LeEco LETV bụ n’ezie nghọta na-enye ọtụtụ ọrụ ga-atọ ndị ọ thatụ ụtọ. Nhọrọ ndị dị ka ọnọdụ panorama n'etiti ndị ọzọ na-emepe ohere dị iche iche na-atọ ụtọ nke na-enyewanye igwefoto zuru oke. Rịba ama na igwefoto ya n'ihu nwere megapixels 8, karịa ihe zuru ezu iji were onwe gị dị mma ma ọ bụ ihe osise onwe onye.
Mkpisiaka mmetụta na-arụ ọrụ kearu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » LeEco LETV S3, nyocha na uche
Ekwentị Cat na-ewepụta smartphones ọhụrụ ya na-eguzogide ọgwụ, Cat S31 na Cat S41, na IFA 2017
Nkwụ nwere ike ịlaghachi na ahịa na ngwaọrụ ọhụrụ na 2018